Qisooyinka Kunhabeen iyo Habeen waxa loo isticmaalay aad iyo aad gaar ahaan waxaa laga qoray buug badan oo kuwa ciyaalka ah waxa kale oo laga sameeyaya Aflaam. Laakiin marka la eego Dhabahaan xiliga aytimi qisadani iyo sid ay kutimi may ahayn sidan ay hada inagusoo gaadhay. Talooyinka qudhoodu waxay isku dayaan inay xididadooda ku soo celiyaan carabiga, Giriigga, Hindi, Yuhuudda, Faaris iyo Turki Riwaayadda iyo suugaanta.
A Thousand Tales wuxuu qayb ahaan ku tiirsanaa qaybaha Hindida. Waa maxay caan ku ah dhamaan qeybaha kala duwan ee Nuuxku waa sheekadii ugu horreysay ee taliyaha Shahrullah iyo xaaskiisa Scheherazade iyo qalabkii feylka ahaa ee lagu dhex darey qorraxda oo dhan. Sheekadu waxay ka socotaa sheekadan asalka ah; Qaar ka mid ah ayaa ku jira talooyin kale, halka kuwo kale ay bilaabaan oo ay ku dhammaanayaan heshiiskooda.
Qaar ka mid ah daabacaadyada waxaa ku jira dhowr boqol oo habeen ah, halka qaar kalena ay ku jiraan 1, ama in ka badan. Inta badan qoraalka ayaa ah qadar, inkastoo aaytani marmarka qaarkood loo isticmaalo heesaha iyo riddada iyo in lagu muujiyo dareen kacsan.